Self- ဖော်ထုတ် Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူဆွီဒင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ရှာဖွေမှုအတွက် Hypersexual Disordering Inventory (2017) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Hypersexual Disorder
လိင် Med ။ 2017 အောက်တိုဘာ6။ pii: S2050-1161 (17) 30068-5 ။ Doi: 10.1016 / j.esxm.2017.08.001 ။
Öbergကီလိုဂရမ်1, Hallberg J ကို2, Kaldo V ကို3, Dhejne ကို C4, Arver S က2.
အဆိုပါ Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory (HDSI) hypersexual ရောဂါ (HD ကို) ၏လက်တွေ့စိစစ်များအတွက်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးကတီထွင်ခဲ့သည်။
ပြဿနာ hypersexuality များအတွက်အကူအညီရှာကြံအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနမူနာအတွက် HDSI အညီအဆိုပြုထားအဖြေရှာတဲ့ entity HD ကို၏ဖြန့်ဖြူးဆနျးစစျနှငျ့အခြို့ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများအကဲဖြတ်ရန်။
sociodemographics အပေါ်ဒေတာကို, အ HDSI သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး (SCS) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သိမှုနှင့်အပြုအမူရလဒျ 16 အမျိုးသမီးများနှင့် hypersexual အဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်သူကို 64 ယောက်ျားကနေအွန်လိုင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ဖြေဆိုသူ hypersexual အပြုအမူများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုရာပူဇော်သက္ကာကိုကြော်ငြာနေဖြင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
HD ကိုများအတွက်အဆိုပြုစံဖုံး HDSI ။
တစ်ခုလုံးကိုနမူနာ၏, 50% HD ကိုများအတွက်သတ်မှတ်ချက်မပြည့်စုံ။ ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်အမျိုးသမီးများသည် HDSI အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူ, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏစေ့စပ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာများနှင့်နာကျင်မှုအကြောင်းပိုမိုစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်းလူတို့သညျအဓိကအားဖွငျ့, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ HD အုပ်စုသည်လိင်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ SCS တွင်ရမှတ်များပြားလာခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် HD နှင့်မတူသောအဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကျိုးဆက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Sociodemographics HD ကိုအပေါ်မသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ HDSI ၏အဓိကရောဂါရှာဖွေရေးစံသတ်မှတ်ချက်သည်အမျိုးသားများ (α = 0.80) နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရမှု (α = 0.81) ကိုပြသည်။ HDSI နှင့် SCS အကြားအလယ်အလတ်ဆက်စပ်မှုရှိသည် (0.51) ။ နမူနာတစ်ခုလုံး (၇၆၊ ၈၀၊ ၉၅%) ၏အများစုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအတွက်စံနှုန်းများကိုပြည့်စုံစေခဲ့သည်။
cutoff ရမှတ်များနှင့်တိကျသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပွုပွငျပွောငျးလဲဖြစ်ကြသည်အဖြစ်စံနှင့် ပတ်သက်. သည့်ပင်ကိုယ်မူလဂယက်၏နောက်ထပ် Explorer, လိုအပ်ကြသော်လည်း HDSI, HD ကိုများအတွက်စိစစ်မှု tool ကိုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Hypersexual ပြဿနာအပြုအမူဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချို့ယွင်းစေပြီး, အ Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ, ပဉ္စမ Edition ကိုအတွက်မပါဝင်ပေမယ့်, HD ကိုသက်သေအထောက်အထား-based ကုသမှုနှင့်၎င်း၏ etiology အပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအဖြစ်ထောက်ခံရပါမည်။
KEYWORDS: လိင်; Hypersexual Disorder; Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory; Inventory ပြ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive